Ahoana ny fomba fampidirana sary amin'ny Instagram avy amin'ny PC: Nanazava tsikelikely | Vaovao momba ny gadget
Eder Esteban | | Tambajotra sosialy, Tutorials
Ny Instagram dia satro-boninahitra ho iray amin'ireo fampiharana malaza manerantany. Manana tambajotra an-tapitrisany ny tamba-jotra sosialy, ankoatry ny fitomboan'ny fitomboany amin'ny taha tsara amin'ny fotoana. Tamin'ny voalohany dia teraka ho fampiharana ho an'ny finday ity tambajotra sosialy ity. Na dia taty aoriana dia noforonina ny kinova an-tranonkala. Izay mamela ny fizahana avy amin'ny solosaina ao anatiny.
Fampandehanana bebe kokoa no nampidirina tao amin'ity kinova tranonkala Instagram ity. Raha ny marina dia io no tsy maintsy ampiasaina raha te hamafa ny kaonty ianao. Iray amin'ireo fiasa efa natolotra mitovy amin'izany dia ny fahafahan'ny mampakatra sary. Noho izany, azonao atao ny mampakatra sary ao amin'ny mombamomba anao amin'ny solosainao.
Izy io dia fiasa izay mety ho tena ilaina amin'ny fotoana maro. Ka raha tsy manana ny telefaona eo akaiky eo ianao, na raha ny sary tianao ampakarina dia voatahiry ao amin'ny solosainao, ny fampiasana an'io fiasa io dia mety ho tena mety. Noho izany, zava-dehibe ny fahafantarana ny fomba fiasan'ity fahafaha-manao ity amin'ny Instagram. Ireto ambany ireto dia holazainay aminao daholo ny fomba ahafahanao mampakatra sary ao amin'ny tambajotra sosialy amin'ny kinova birao.
Fomba ahazoana mpanaraka ao amin'ny Instagram
1 Ampidiro ao amin'ny Instagram amin'ny PC ny sary
1.1 Ampidino ny sary avy amin'ny PC mankany amin'ny Instagram: Dingana
2 Fahasamihafana amin'ny fampidinana avy amin'ny finday avo lenta
Ampidiro ao amin'ny Instagram amin'ny PC ny sary
Toy ny lojika, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny miditra ny kinova an-tranonkala amin'ny tambajotra sosialy, ity rohy. Mila miditra ao amin'ny kaontin'ny mpampiasa ianao, raha tsy mbola misy ny fivoriana natomboka. Raha vantany vao natomboka tao amin'ny tambajotra sosialy ny fivoriana, mila miditra ny mombamomba ny mpampiasa ianao. Vita amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary miendrika olona eo ankavanana ambony. Io no sary masina fahatelo avy amin'ny ankavia. Azonao atao ihany koa ny manindry ny solonanarana hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny efijery. Ireo safidy roa ireo dia mitondra antsika amin'ilay mombamomba. Afaka manomboka isika.
Noho izany, rehefa efa ao anaty ny mombamomba antsika isika dia mijery ireo sary masina hita eo ankavanan'ny solonanarana. Eto no ahitanao izany ny sary famantarana eo amin'ny farany havanana dia fakan-tsary misy tsipika miloko maro, izay misy marika + eo ankavanana ambany. Ity no sary famantarana izay tsy maintsy tsindrio mba hahafahantsika mampakatra sary amin'ny Instagram avy amin'ny PC. Ka rehefa manindry azy isika dia manomboka ny dingana fampidinana ilay sary voalaza fa tiantsika hapetraka amin'ny tambajotra sosialy. Ny dingana manaraka dia aseho etsy ambany.
Ampidino ny sary avy amin'ny PC mankany amin'ny Instagram: Dingana
Rehefa tsindrio ilay kisary voalaza dia ny zavatra voalohany angatahina amintsika dia raha te hanampy ity sary ity amin'ny mombamomba na ny tantara izahay. Ny mpampiasa tsirairay dia tsy maintsy misafidy ny safidy mahaliana azy ireo. Amin'ity tranga ity, ny zavatra hataontsika dia ny mampakatra sary amin'ny mombamomba antsika ao amin'ny Instagram. Noho izany dia safidintsika eo amin'ny efijery io safidy io. Ity no bokotra miseho amin'ny manga eo amin'ny efijery.
Manaraka izany, hisy varavarankely hisokatra eo amin'ny efijery izay tsy maintsy ataontsika safidio ny sary tianay apetraka amin'ny Instagram. Izany dia toy ny rehefa te-mampakatra sary amin'ny pejin-tranonkala na mandefa mailaka izahay. Noho izany, ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny mankany amin'ny toerana misy ny solosaina izay misy ilay sary resahina izay tiantsika halefa ao amin'ny mombamomba antsika. Ka ilay mpikaroka rakitra no ampiasainay hahatongavana amin'izany toerana manokana izany. Rehefa hitantsika ny sary dia tsindrio fotsiny dia kitiho ny bokotra misokatra eo amin'io varavarankely io.
Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary avy amin'ny Instagram
Vantany vao voafidy ny sary, hiseho eo amin'ny efijeryo Instagram ity sary ity. Ny dingana voalohany atolotra dia ny fanitsiana ny habeny. Mba mifanaraka amin'ny haben'ny sary hitantsika ao amin'ny tambajotra sosialy. Noho izany dia tsy maintsy manapaka sy manitsy azy isika arakaraka izay tiantsika. Avy eo isika dia afaka manome ity manaraka ity, izay ahafahantsika manohy amin'ny fanomanana ny famoahana ny sary voalaza.
Amin'ny dingana manaraka dia afaka manao izany isika avy eo soraty ny lahatsoratra tianay hapetraka amin'ny famoahana ny sary ao amin'ny mombamomba anay. Avela hiditra an-tsoratra ary koa tenifototra raha te hampiasa azy ireo ianao. Amin'izany fomba izany dia efa vonona ny sary. Rehefa tsindrio ny manaraka, dia havoaka eo amin'ny mombamomba anay ao amin'ny tambajotra sosialy malaza mivantana ity sary voalaza ity. Tapitra ny dingana ankehitriny. Ny sary dia azo jerena sahady amin'ny mombamomba azy. Ka ireo mpanara-dia antsika dia afaka mahita izany, tia azy na mamela hevitra eo aminy amin'ny fotoana rehetra.
Fahasamihafana amin'ny fampidinana avy amin'ny finday avo lenta
Raha mampiasa Instagram tsy tapaka ianao dia ho voamarikao fa misy izany fahasamihafana mazava amin'ny fizotry ny fampidirana sary avy amin'ny PC. Ny fiovana lehibe indrindra dia raha mampakatra sary avy amin'ny solosaina isika dia zara raha misy ny safidy fanovana ho an'io sary io. Raha mampakatra sary avy amin'ny finday avo lenta mankany amin'ny tamba-jotra sosialy ianao, dia misy safidy fanovana maromaro.
Ankoatry ny fanovana habe ny sary, azo ampiana sivana hahazoana ny vokany irina. Ka io sary io dia azo ovaina amin'ny fomba miavaka. Saingy tsy azo atao (farafaharatsiny mbola tsy) amin'ny kinova PC an'ny Instagram. Ny hany zavatra azo atao amin'ity tranga ity dia ny manitsy ny haben'ny sary tianao ampidirina. Saingy tsy misy safidy hafa hanitsiana ny sary, hampidirina ireo sivana na hanovana fanovana, izay misy ao amin'ilay kinova voalohany.
Tetika 11 hahazoana mpanaraka bebe kokoa amin'ny Instagram
Noho izany, na dia mampakatra sary amin'ny Instagram avy amin'ny kinova PC aza dia tsotra, ankoatry ny tena ilaina dia tsy mitovy izany. Mba hahafahan'ireo mpampiasa liana te-hanitsy io sary io, tsy maintsy jerenao izany. Satria raha te-hampiditra sivana amin'ny sary resahina ianao dia tokony hampiasa ny fampakarana sary avy amin'ny finday avo lenta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tambajotra sosialy » Ahoana ny fomba fampidinana sary amin'ny Instagram avy amin'ny PC
Huawei P30 Pro, ity no sainam-pirenena vaovao an'ny orinasa sinoa
Fanadihadiana sy toetra mampiavaka ny monitor AOC C24G1 gaming